Up To Date ဖြစ်ပြီး Free ကြည့်လို့ရမယ့် Anime Website/Channel (၇) ခု | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Up To Date ဖြစ်ပြီး Free ကြည့်လို့ရမယ့် Anime Website/Channel (၇) ခု
ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမှ တချို့က Anime ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ရှင်သန်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်း Anime ဆိုတာ just japanese animation မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာစရာ၊ သင်ယူစရာ၊ မှတ်သားစရာတွေအများကြီးပါတဲ့ animation တစ်ခုပါ။
Anime ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ "လူတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရသလဲ။ အမှားအမှန်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချသင့်သလဲ။ ကိုယ်လုံးဝ ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေကရော မိတ်ဆွေအစစ်ဟုတ်သလား။ Team နဲ့လုပ်ဆောင်ရင် အောင်မြင်နိုင်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်းတန်ဖိုးထားကြရမယ်" စသဖြင့် ပညာပေးအကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ အခုလို IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ Anime Episode တွေကို Mobile Internet Or Wifiနဲ့ Website တွေ၊ App တွေမှာ ကြည့်လို့ရနေပါပြီ။ Bill နဲ့ Premium ဝယ်ပြီး ကြည့်ရှုရတဲ့ Website တွေ၊ App တွေ ရှိသလို Free ကြည့်လို့ရတဲ့ ဟာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
လတ်တလောက Facebook မှာ Anime Group တွေကို Copy Right နဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်းတွေခံရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အားလပ်ရက်တွေကို အပြင်ထွက်ရမှာ ပျင်းတဲ့အတွက် အိမ်ထဲမှာပဲ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ကြည့်ရင်း Chill ဖို့ Free Channel/Website အချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ Crunchyroll၊ Netflixနဲ့ iflix တို့ကိုတော့ တော်တော်များများ သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။
Anime တော်တော်များများရှိပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ Log In မှလုပ်စရာမလိုဘဲ တန်းကြည့်ရုံပါပဲ။
Link >> https://cutt.ly/6nUhBzd
ကြည့်ချင်တဲ့ Anime တွေကို တစ်နေရာထဲမှာစုထားသလိုမျိုးပါပဲ။ ဒီ Website လေးက တရားဝင် Free Site ဖြစ်ပြီး UI ကလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့ပါတယ်။
Link >> https://cutt.ly/3nUjDOn
တခြား Website တွေလို Anime တော်တော်များများစုံတဲ့အပြင် ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
Link >> https://cutt.ly/TnUkpjP
4. Aniplus Asia
Free Watch Website တစ်ခုဖြစ်ပြီး တော်တော်လေး အဆင်ပြေတဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Anime တွေကို ရှာရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
Link >> https://cutt.ly/0nUkmNd
Free Watch Channel တစ်ခုဖြစ်ပြီး Anime တွေစုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်။
Link >> https://cutt.ly/1nUj6Uc
6. Muse Asia
Youtube channel တစ်ခုဖြစ်ပြီး Boku ကြည့်ဖူးသမျှထဲမှာ အဆင်ပြေဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Link >> https://cutt.ly/LnUkKYS
ဒီ Channel က Retrocrush၊ Muse Asia တို့လို Youtube channel တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါတယ်။
Link >> https://cutt.ly/wnUk0eF
Movies Read 80 times
တစ်ခေတ်တခါက အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ‘တစ်ကျော့ နှစ်ကျော့ တေးကိုသီ’
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ တစ်ခေတ်တခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး ဝင်းဦး